I-mini-villa entsha eSkuru, eNacka, kufutshane neStockholm C
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBjörn
Entsha (2018) mini-villa e Skuru, Nacka
I-Mini-villa enazo zonke izinto ezinje nge-dishwasher, i-washer dryer, i-Air conditioning, ukufudumeza umgangatho, i-TV ye-LED, i-Wifi yasimahla njl.
Amanqwanqwa amabini amakhulu adibanisa neendawo zangaphakathi kunye nezangaphandle.
Indawo yokulala enkulu enebhedi ebanzi eyi-180 cm (ipokotho entle kakhulu umatrasi). Isofa kwigumbi lokuhlala yibhedi esongwayo elala abantu ababini. Amathafa amabini anamagumbi, omabini anefanitshala kunye neetafile. Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
Ibhedi yesofa ekumgangatho ophezulu eguquka ngokulula ukuya kwibhedi ebanzi eyi-140 cm (kwakhona ikhululekile kakhulu).
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kubandakanya i-micro, i-dishwasher kunye nomenzi we-espresso.
Indawo yokupaka eyakhe.
Indawo entle kufutshane nendawo yokugcina indalo kaNyckelviken ene-5 km (iikhilomitha ezi-3) ukubaleka umkhondo oziimitha ezili-100 ukusuka endlwini, izilwanyana ezinjengeenkomo, iigusha kunye nemivundla, kunye nemibono emihle yokungena kweStockholm ukusuka kuLwandle lweBaltic.
Iikhilomitha ezili-10 ukusuka eStockholm, unxibelelwano oluhle ukuya eStockholm. Indawo yokupaka yasimahla ecaleni kwendlu. Ukuhamba ngemizuzu eyi-10 ukuya kwiivenkile ezi-2 ezilula, ii-gyms ezi-2, i-cafe yeklasi ephezulu kunye neendawo zokuphumla ezilungileyo (ezimbini zaseThai, enye inokutya kwendabuko yaseSweden kunye neepizzeria ezininzi). Ukuhamba ngemizuzu emi-6 ukuya echibini kunye nolwandle olunesanti (Bastusjön).
Umzila wokubaleka weNyckelvik Nature Reserve weekhilomitha ezi-5 uqala malunga ne-100 leemitha ukusuka endlwini. Kukho ipaki yesizwe eNyckelviken, eqala kufutshane nendlu. Uninzi lwamawa okuhlamba kunye nolwandle oluncinci eNyckelviken, kufutshane nendlu enkulu, eqala nge-1700's, apho kukho indawo yokutyela kunye nekhefi (malunga neemitha ezingama-700 (iiyadi ezingama-800) ukusuka endlwini)
Isitalato esithule kakhulu, kunye nendawo ekhuselekileyo. Ukufikelela kwindawo emangalisayo kunye neebhafu kumgama wokuhamba. Iindawo zokutyela, indawo yokuzivocavoca, indawo yokwenza iinwele, ikhefi ephezulu kunye neevenkile ezimbini zokutya zibekwe malunga nekhilomitha enye e-Ektorp. (imizuzu eyi-10 ukuhamba)
Umbuki zindwendwe ngu- Björn
Sifumaneka ngeSMS okanye ngeposi. Ngokuhlwa nangeempelaveki, kulungile ukunkqonkqoza kumnyango wethu (indlu emhlophe ngasentla kweMini-Villa) ukubuza ngendawo yokuhlala, okanye ufumane iingcebiso malunga nokuba wenze ntoni eStockholm, njl.
Iilwimi: Dansk, English, Français, Deutsch, Norsk, Svenska